केटीहरूको यी ४ कुराबाट आकर्सित हुन्छन केटाहरू - Sex Toys Shop
केटीहरूको यी ४ कुराबाट आकर्सित हुन्छन केटाहरू
16.11.2021 टिप्स18plusstoreLeaveacomment
केटाहरूलाई आकर्सित गर्नका लागि केटीहरू विभिन्न स्टाईल पर्ने गर्ने गर्छन। मेकअपको साथ् साथ ड्रेसअपमा समेत बिसेस ध्यान दिने गरेको पाईन्छ। तर के तपाईलाइ थाह छ ? कि अधिकांस केटाहरू वास्तवमा के कुरामा आकर्सित हुन्छन ?
तपाई थोरै मात्र ध्यान दिनुभए यो सजिलै पत्ता लगन सक्नु हुन्छ कि केटाहरूको ध्यान के मा छ रे कुन कुराले केटाहरू लाई दिवाना बनाउन सक्छ। हामि तपईलाई बताउन गईरहेकाछौ कि केटीहरू को कुन ४ कुरा जसमा केटाहरू पहिलो भेटमा नै आकर्सित हुन्छन।
केटीहरूको आँखामा केटाहरूको पहिलो नजर पर्दछ। हरकसैको कुराकानी को सुरुवात पनि आखा बाटै सुरू हुन्छ। त्यसैले पनि आँखा सबै भन्दा जरूरी चिज हो। भनिन्छ आँखाले ब्याक्तिको स्वाभावको बारेमा पनि बताउछ। त्यसैले केटाहरू सबै भन्दा पहिला केटीहरूको आँखाबाट उनीहरूको स्वाभाव र ब्याक्तित्व पत्ता लगाछन।
केटीहरूको एक मुस्कान केटाहरूलाई ईम्प्रेस पार्नकोको लागि काफी हुन्छ। मधुर मुस्कानले कुनै पनि केटालाई सजिलै मन्त्रमुग्ध बनाउन सक्दछ। तपाईको एक कुटिल मुस्कानले कुनै पनि केटाला तपाईको प्रेममा पर्न बिवस गराउछ। केटीहरूको मुस्कान प्रेमको प्रतिक मानिन्छ।
केटीहरूको लागि फिन्गरिंग टोय। सुरक्षित अनि मजेदार
यहा क्लिक गरि
मासेंजर या ह्वाट्सएप्
मार्फत अहिलेनै अर्डर बुक गराउन सकिन्छ।
कुनै पनि केटिको सुन्दरतामा सुगन्ध भर्नको लागि उसको कपालको पनि बिसेस भूमिका रहन्छ। केटीहरूको सुन्दर कपालले केटाहरूलाई बहुत आकर्सण गर्दछ। केटाहरूलाई ज्यादा ढांचा परिएको भन्दा पनि सिम्पल कपाल धेरै मन पर्दछ। अनुसन्धानका अनुसार धेरैजसो केटाहरूलाई राम्रो, स्टाईलिस, चमकदार, र मुलायम कपाल बिसेस मन पर्दछ।
केटाहरूको लागि एकदमै सरल र सुरक्षित से*क्स टोय
बिस्वबजारको हट सेलिङ्ग प्रोडक्ट
अनुसन्धानका अनुसार केटीहरूको मिठो अनि स्पस्ट आवाज केटाहरूलाई धेरै मन पर्दछ। यो यसकारण कि केटीहरूको आवाजमा धेरै रहस्य लुकेको हुन्छ जुन धेरैजसो केटाहरूले बुझ्न सक्दछन। जस्तो कि केटाहरू संग कुरा गर्दा केटिको बोलीको टोन बहोत नरम छ भने, उक्त केटिको स्वभाव नम्र / कोमल भएको मानिन्छ। तेज आवाज मा कुरा गर्ने केटिको स्वाभाव आक्रामक हुने मानिन्छ। त्यसैगरि मधुरो आवाजमा कुरागर्ने केटिमा ईनर्जीको कमि भएको मानिन्छ।
लिङ्गको साईज बढाउने नेचारल थेरापी पम्प
बिना कुनै साईड एफ़ेक्टक्स
Previous PostHow To Make Your Bad More Sexy?
Next Postयौन – एक मिठो अभ्यास
कण्डम र यसका फ्लेवरहरू
श्रीमानलाइ आफ्नो काबुमा राख्ने क्षमता हुन्छ यी राशीका महिलाहरुमा
अटेरी,घमण्डी र जिद्दी हुन्छन यी राशीका ब्यक्तिहरु, सुन्दै सुन्दैनन अरुको कुरा
देखावटी गर्न खप्पिस हुन्छन यी राशीका पुरुषहरु
Fortmouth Avenue245349 New York
Tel: 0900 – 393 0100 000
Copyright © 2022 Sex Toys Shop - Powered by 18 Plus Store
The Content On This Site Is Made For Adults. Please Make Sure You Are You Are Above 18 Years.
Yes ! I'm 18 Plus No ! I'm Under 18